Gufgaf|Online आकाश अधिकारीको भतिज नभएको भए झन् छिटो हिरो हुन्थे (भिडियो)
आकाश अधिकारीको भतिज नभएको भए झन् छिटो हिरो हुन्थे (भिडियो)
गफगाफ - नायक आर्यन अधिकारीले चलचित्र के म तिम्रो होइन र बाट नेपाली चलचित्र डेब्यु गरेका हुन् । नाताले उनि कलाकार आकाश अधिकारीका भतिजा हुन् । उनि अभिनित चलचित्र बाँध माँयाले आज शुक्रबार बाट प्रदर्शनमा आएको छ । उनै आर्यन अधिकारी सँग हामीले चलचित्र बाँध माँयाले को पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गरेका छौँ ।
चलचित्र आजबाट प्रदर्शनमा आएको छ तापाई ले रियलमा चाहि कसैलाई मायाँले बाध्नु भएको छ की ?
हा हा हा अहिले सम्म मायाँले माध्ने मान्छे पाएकै छैन, भए पछि भन्छु है ?
तपाईले तिन जना नायिका सँग रोमान्स गरिसक्नु भयो । काम गरेका तिन नायिका मध्ये कुन हट लाग्यो ?
हाहा,,,भन्नैपर्ने हो र ? तिनै जना उस्तै नै हो तर अलि बढिचाहि प्रियंकानै हट लाग्छ ।
बाँध माँयालेको छायांकन नवलपरासीको बर्दाघाटमा तपाइँकै अनुरोधमा भएको भन्छन् नि आफ्नै गाँउ भनेर हो ?
जब मैले फिल्मको स्क्रिप्ट पढे तब मलाई त्यो ठाँउमा छायांकन गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो र मैले फिल्मका निर्माता निर्देशक लाई त्यस स्थानका बारेमा बताए । उहाँहरु गएर लोकेसन हेर्नु भएछ मन परेपछि उतै छायांकन गरिएको हो ।
दर्शकले तपाँईलाई बलिउड नायक टाइगर सर्फ सँग दाँज्नु हुन्छ, तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?
दर्शकहरुले मात्र हैन पत्रकार साथीहरुले पनि यो बिषय उठान गर्ने गरेको पाउछु जसरी तपाइले अहिले गर्नु भयो । तर मेरो आफ्नै पहिचान छ, र म एक नेपाली कलाकार हु ।
यदि तपाइ आकाश अधिकारीको भतिज नभएको भए चलचित्र क्षेत्रमा दर्शकले आर्यनलाई देख्न पाउनुहुन्थ्यो ?
यदि आकाश अधिकारीको भतिज नभएको भए यो भन्दा धेरै पहिला नै नायकका रुपमा परिचित हुन्थे होला,अझ भनौ यो भन्दा पहिले नै चलचित्रमा अभिनय गरिसक्ने थिए ।